UNonophelo loBuqu kunye neKhaya
Izihluzi zendalo ze-UV
Izihluzo zekhemikhali zeUV
Izihluzo ze-UV zakwanyama
Okusingqongileyo, iNtlalo kunye noLawulo
IiNdawo Zethu Ehlabathini Lonke
Kutheni ufuna iVithamin C kunye neRetinol kwindlela yakho yokuchasa ukuguga
ngu admin ngo 2021-12-03
Ukunciphisa ukubonakala kwemibimbi, imigca emihle kunye nezinye iimpawu zokuguga, i-vitamin C kunye ne-retinol zimbini izithako eziphambili zokugcina kwi-arsenal yakho. IVithamin C yaziwa ngokuqaqamba kwayo...
Indlela yokufumana i-Even Tan
ngu admin ngo 2021-11-25
I-Tans engalinganiyo ayiyonwabisi, ngakumbi ukuba wenza umzamo omkhulu wokwenza ulusu lwakho lube ngumthunzi ogqibeleleyo wetan. Ukuba ukhetha ukufumana i-tan ngokwemvelo, zimbalwa izilumkiso onokuthi uzithathe...
Izithako ezi-4 zokufumisa iiMfuno zesikhumba esomileyo unyaka wonke
ngu admin ngo 2021-09-02
Enye yezona ndlela zilungileyo (kwaye zilula!) Iindlela zokugcina ulusu olomileyo kungokulayishwa kuyo yonke into ukusuka kwiiserum ze-hydrating kunye ne-moisturizers ecebileyo ukuya kwi-emollient creams kunye ne-lotions epholileyo. Nangona kunokuba lula ...
Uphononongo lwezenzululwazi luxhasa amandla kaThanaka 'njengesikhuseli elangeni sendalo'
ngu admin ngo 2021-08-19
Izicatshulwa ezivela kumthi wase-Asia-mpuma ye-Asiya i-Thanaka inokubonelela ngeendlela ezizezinye zendalo zokukhusela ilanga, ngokophononongo olutsha olucwangcisiweyo oluvela kwizazinzulu zaseJalan Universiti eMalaysia naseLa...
Umjikelo woBomi kunye nezigaba zePimple
ngu admin ku 2021-08-05
Ukugcina ibala elicacileyo akukaze kube ngumsebenzi olula, nokuba une-skincare routine yakho ukuya kutsho kwi-T. Ngenye imini ubuso bakho bungangabi nasiphako kwaye obulandelayo, i-pimple ebomvu ebomvu iphakathi ...
UBUHLE NGO-2021 NANGAPHAYA
ngu admin ngo 2021-04-28
Ukuba sifunde into enye ngo-2020, kukuba akukho nto injengoqikelelo. Okungalindelekanga kwenzeka kwaye sonke kwafuneka sikrazule iingqikelelo kunye nezicwangciso zethu kwaye sibuyele kwibhodi yokuzoba...
INDLELA ISHISHINO LOBUHLE LINOKWAKHA NGAMANDLA NGCONO
I-COVID-19 ibeke u-2020 kwimephu njengowona nyaka wembali kwisizukulwana sethu. Ngelixa intsholongwane yaqala ukusebenza ekupheleni kuka-2019, impilo yehlabathi, uqoqosho ...
IHLABATHI EMVA: IZINTO EZI-5 EZIHLALA
ngu admin ngo 2021-04-20
5 IiMathiriyeli ekrwada Kumashumi ambalwa eminyaka adlulileyo, ishishini lemathiriyeli ekrwada lalilawulwa ziinguqulelo eziphucukileyo, ubuchwephesha obuphezulu, imathiriyeli entsonkothileyo kunye neyodwa. Ayizange yanele, njengoqoqosho, n...
Ubuhle baseKorea busakhula
ngu admin ngo 2021-03-19
Ukuthunyelwa ngaphandle kwezithambiso zaseMzantsi Korea kunyuke nge-15% kulo nyaka uphelileyo. I-K-Beauty ayihambi kungekudala. Ukuthunyelwa ngaphandle kwezithambiso zaseMzantsi Korea kunyuke nge-15% ukuya kwi-6.12 yeebhiliyoni zeedola kunyaka ophelileyo. Inzuzo yaba luphawu...
Iifilitha ze-UV kwiMarike yoKhathalelo lweLanga
ngu admin ngo 2021-01-03
Ukhathalelo lwelanga, kwaye ngokukodwa ukukhuselwa kwelanga, lelinye lamacandelo akhula ngokukhawuleza emarike yokhathalelo lomntu. Kwakhona, ukhuseleko lwe-UV ngoku lubandakanyiwe kwii-dai ezininzi ...